Muuri News Network » DEG DEG: Amaro Layaab leh oo Shabaab kasoo saartay Gobolka Sh/hoose kana dhaqangalay Muqdisho.
DEG DEG: Amaro Layaab leh oo Shabaab kasoo saartay Gobolka Sh/hoose kana dhaqangalay Muqdisho.
Mar 3, 2018 - Comments off
Amaro ay soo saareen Kooxda Al Shabaab ayaa si rasmi ah uga dhaqangalay Degmooyin ka mid ah Gobolka Banaadir, kadib markii Shabaab ay xireen dhawr garoon oo kuwa lagu ciyaaro kubadda Cagta.
Degmooyinka illaa hadda la og yahay ee Shabaab ay ka dhaqangeliyeen amaradooda ayaa waxa ay kala yihiin, Dayniile, Kaxda, Yaaqshiid iyo Degmada Heliwaa.
Milkiilayaasha xarumaha lagu ciyaaro Kubadda Cagta (Salaxa) ayaa loo soo diray taleefoono, kadibna lagu wargeliyay inay tagaan deegaanka Tooratoorow ee Gobolka Shabellaha hoose oo Shabaab ay ku sugan yihiin.
Qaar ka mid ah Milkiilayaasha xarumaha Kubadda Cagta ee Degmooyinkaasi ayaa tagay Tooratoorow, halka qaar kalena ay ka cudur daarteen tagista deegaankaasi, balse ay u sheegeen Shabaab inay fulinayaan wax kasta oo amar ah oo ay soo saaraan Shabaab.
Nin ka mid ah dadkii taleefoonka Shabaab ay kula soo hadleen, ayaa sheegay in lagu amray inuu xiro goob uu ka furtay Degmada Dayniile oo dhalinyarada ay ku ciyaarayeen Kubadda Cagta, lacagana uu ka qaadi jiray.
Shabaab uma aysan sheegin faah faahin ku saabsan sababta ay u amreen in la xiro goobaha lagu ciyaaro Kubadda Cagta ee rooga uu yaalo, balse illaa hadda waxaa la og yahay Degmooyinka, Dayniile, Kaxda, Yaaqshiid iyo Heliwaa goobo ku yaalay in la xiray.
Waxaa suuragal ah Al Shabaab in goobahaan ay u xireen inay ka waayeen lacago baad ah oo ay ka qaadaan ganacsatada Muqdisho, Shabaabna ay ugu magacdareen lacagahaasi Zakawaad, sidoo kalena waxaa suuragal ah Shabaab inay u xireen goobahan inay diidan yihiin dhalinyarada inay sameeyaan isdhexgal iyo jawi nabdoon inay ku fekeraan, maadaama Kubadda Cagta ay dhalinyarada u tahay jawi isdhexgal wanaagsan.
Al Shabaab ayaa dila cidii diida inay u hogaansanto awaamiirta kala duwan ee ay soo saaraan, waana midda keentay cabsida Bulshada oo durba horay ka dhaqangeliya amarada ay soo saaraan Kooxdaasi Shabaab.